Kungani abacwaningi base-Afrika kufanele bajoyine iPsychological Science Accelerator - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu Adeyemi Adetula noPatrick S. Forscher on I-13th Ngo-Mashi 2020 I-13th Ngo-Mashi 2020
Izinhloso ze-KiaArXiv zibandakanya ukukhuthaza umphakathi phakathi kwabaphenyi base-Afrika, ukwenza kube lula ukubambisana phakathi kwabaphenyi base-Afrika kanye nabangewona ama-Afrika, futhi kuphakamise ulwazi ngocwaningo lwase-Afrika esigabeni samazwe aphesheya. Lezi zinhloso zihambisana nezinhloso zenhlangano ehlukile, i I-Psychological Science Accelerator (PSA). Lokhu okuthunyelwe kuchaza ukuthi lezi zinhloso zihlangana kanjani futhi ziphikisana nokuthi ukujoyina i-Psychological Science Accelerator kuzosiza amalungu omphakathi ocwaningweni we-KiaArXiv ngokuqhubeka nokubambisana kanye nokufinyelela izinsiza.
Yini i-Psychological Science Accelerator?
I-PSA iyinethiwekhi yokuzithandela, esatshalaliswa emhlabeni jikelele, yentando yeningi yamalebula angaphezu kwama-500 avela emazweni angaphezu kwama-70 kuwo wonke amazwekazi ayisithupha anabantu abaningi, kubandakanya ne-Afrika. Izifundo ze-Psychology ngokwesiko zilawulwa ngabaphenyi baseNtshonalanga abafunda ababambiqhaza baseNtshonalanga (I-Rad, iMartingano, namaGinges, i-2018). Enye yezinhloso zokuqala ze-PSA ukusiza ukulungisa le nkinga ngokwandisa uhla lwabacwaningi kanye nababambiqhaza ocwaningweni lwezengqondo, okwenza ukuba i-psychology imele abantu.
Le nhloso iyahambisana nezinhloso ze-KiaArXiv: ukubhekana nokushoda kwabacwaningi bezengqondo abangasibo abaseNtshonalanga kubandakanya ukufaka ulwazi ngabacwaningi bezengqondo base-Afrika kanye nokukhuthaza ukusebenzisana phakathi kwabaphenyi base-Afrika kanye nabangewona ama-Afrika. Ngaphezu kwalokho, i-PSA ikakhulukazi inentshisekelo yokwandisa inethiwekhi yayo e-Afrika: yize i-PSA ifisa ukufezekisa ukumelwa kuwo wonke amazwekazi, ekugcineni I-1% labs yayo engama-500 yayivela e-Afrika.
I-PSA ingawuzuzisa kanjani umphakathi wokucwaninga wase-Afrika
Umgomo owabiwe we-PSA ne-KiaArXiv ngukuthi ukuzuza / ukuqasha iqembu labaphenyi base-Afrika ukuthi bajoyine i-PSA nezinhlelo zayo ocwaningweni olumangalelwe emhlabeni jikelele kusayensi yezengqondo. Sizibophezele ekwandiseni iphrofayili yamalungu omphakathi ocwaningweni wase-Afrika.
Noma yimuphi umcwaningi wezengqondo angajoyina i-PSA mahhala. Ama-labs angamalungu azothola ithuba lokufaka isandla ekuphathweni kwe-PSA, athumele izifundo ezizokwenziwa ngenethiwekhi ye-PSA yamalebhu, futhi asebenzisane futhi athole umlobi kumaphrojekthi abandakanya amakhulu abacwaningi abavela kuwo wonke umhlaba. Amaphrojekthi we-PSA akhulu kakhulu ngezinga; isifundo sokuqala somhlaba wonke sisebenzisa inethiwekhi yayo (UJones et al., 2020) Kuthinte ama-labs angaphezu kwe-100 aqhamuka emazweni angama-41, ngokuqasha abahlanganyeli abangaphezu kwe-11,000.
I-PSA yakhiqiza inani elikhulu lokuxhumana kocwaningo, okungaba yikho konke kwabelwane mahhala ngeAfricaArXiv. Imininingwane ye-PSA ehilela abahlanganyeli base-Afrika iyatholakala mahhala ekuhlaziyweni kwesibili. Lawa madatha angahlaziywa ngokugxila kwe-Afrika ethile, futhi ucwaningo oluphumelelayo lungabuye lwabiwe ngokukhululekile nge-AfricArXiv.
Izinzuzo ezithile zobulungu be-PSA
Isinyathelo sokuqala sokuthola izinzuzo ze-PSA abe yilungu Ngokuzwakalisa ukuzibophezela komgomo wokufaka isandla ku-PSA ngandlela thile. Ubulungu bukhululekile.
Lapho usuyilungu, uthola ukufinyelela kulezi zinzuzo ezinhlanu ezilandelayo:
Ukulethwa kwamahhala kweziphakamiso ukuze kuqhutshwe iphrojekthi enkulu, enamazwe amaningi. I-PSA yamukela iziphakamiso zezifundo ezintsha ezizoqhutshwa kunethiwekhi yayo njalo ngonyaka phakathi kukaJuni no-Agasti (ungabona ucingo lwethu lwango-2019 lapha). Nawe ungahambisa isiphakamiso. Uma isiphakamiso sakho samukelwa ngesikhathi senqubo yethu yokubuyekezwa kontanga, i-PSA izokusiza ukuthi uqokelele abahlanganyeli kusuka kwinethiwekhi yakhe yamazwe angama-500 kanye nokusekelwa ngayo yonke imikhakha yokuqedela isifundo esikhulu esiningi. Ungakwazi ke uhambise noma yimiphi imikhiqizo yocwaningo ebangelwa yile nqubo yamahhala njenge-copyright ye-AfricArXiv.
Joyina amaphrojekthi we-PSA. I-PSA njengamanje isebenza ngamaphrojekthi ayisithupha elebhu, enye yazo icasha abahlanganyeli ngenkuthalo. Kumaviki amabili alandelayo, i-PSA izokwamukela igagasi elisha lezifundo. Njengomhlanganyeli kwesinye sezifundo zethu, ungaqoqa idatha noma usize ngokuhlaziya izibalo, ukuphathwa kwephrojekthi, noma ukuphathwa kwedatha. Uma ujoyina iphrojekthi njengomhlanganyeli, uzothola ukubhala kumaphepha avela kuphrojekthi (engaba kwabelwane ngokukhululeka nge -AfriArXiv). Ungafunda ngezifundo i-PSA esebenza kuzo njengamanje lapha.
Joyina ibhodi lokuhlela le-PSA. I-PSA ithumela izingcingo zokuhambisa okusha ocwaningweni njalo ngonyaka. Njengama-ejensi wesibonelelo kanye namajenali, kudinga abantu ukuthi basebenze njengababuyekezi kulokhu okuthunyelwe okufundwayo. Ungakhombisa intshisekelo yokusebenza njengombuyekezi lapho uba yilungu le-PSA. Ngokubuya, uzokleliswa njengelungu lebhodi lokuhlela le-PSA. Ungangeza lobulungu bebhodi yokuhlela kuwebhusayithi yakho kanye ne-CV.
Joyina elinye lamakomidi okulawula e-PSA. Izinqubomgomo nezinqubo ze-PSA zakhiwa ezinhlobonhlobo zazo amakomidi. Amathuba avela njalo ukujoyina amakomidi. Ukusebenzela amakomidi kusiza ekwakheni ukuqondiswa kwe-PSA futhi kwenza abacwaningi bathintane nabangaba abahlanganyeli abavela kuwo wonke umhlaba. Uma unesifiso sokujoyina ikomidi, joyina i- Incwajana yezindaba ye-PSA futhi PSA Slack indawo yokusebenza. Senza izimemezelo zamathuba amasha okujoyina amakomidi ethu kulezi ziphulelo.
Thola isinxephezelo ukuze unciphise izindleko zokusebenzisana. Siyabona ukuthi ukusebenzisana kwamazwe omhlaba kungaba inselelo futhi kubize, ikakhulukazi kubacwaningi ezikhungweni ezihola kancane. I-PSA ngakho-ke ihlinzeka ngemithombo yezezimali ukwenza lula ukusebenzisana. Njengamanje, sinechibi elincanyana le izibonelelo zabasebenzi belungu, izibonelelo ezincane ze- $ 400 USD ukusiza ukwehlisa izindleko zokubamba iqhaza kuphrojekthi yokucwaninga ye-PSA. Ungafaka isicelo sesibonelelo selabhm lapha.
I-PSA ihlose ukuthuthukisa ukusebenzisana kumaphrojekthi wethu amakhulu, awezwe lonke nowezinhlobonhlobo. Sikholwa ukuthi ukusebenzisana lokhu kungaletha izinzuzo ezinkulu kubacwaningi base-Afrika. Uma uvuma, ungakwenza ujoyine inethiwekhi yethu ukuthola ukufinyelela emphakathini ophumelelayo nowamazwe omhlaba wabaphenyi abangaphezu kuka-750 abavela kuma-labs angama-548 emazweni angaphezu kwama-70. Silangazelele ukusebenza nawe.
Imvelaphi yaseNigeria, u-Adeyemi Adetula ungumfundi we-PhD no I-CO-RE Lab e-Université Grenoble Alpes futhi oyilungu le I-Psychological Science Accelerator. U-Ade ufunda ukuthi okutholakele ngokwengqondo kuvamisa izwe lonke, ikakhulukazi emazweni ase-Afrika. Izinhloso zakhe zocwaningo zifaka ukuphindaphinda, isayensi yezenhlalo nokuhlola, Psychology yamasiko, izindlela eziningi ku-psychology, kanye ne-psychology ye-forensic kanye ne-fixation. Ungamfinyelela kuye adeyemiadetula1@gmail.com
UPatrick S. Forscher usosayensi ocwaningayo no I-CO-RE Lab e-Université Grenoble Alpes efunda ukuthi angakwazi kanjani ukusebenzisana ngokubambisana kwezengqondo. UnguMqondisi Womsizi Wedatha kuPsychological Science Accelerator. UPatrick ubhekele imisebenzi eminingi e-PSA, kubandakanya ukuthuthukiswa kanye nokwenza izinqubomgomo ze-PSA kanye nezinhlelo zokuxhasa ngezimali. Izintshisakalo zakhe zocwaningo zifaka ucwaningo olusetshenzisiwe, ucwaningo lwensimu, ukuhlaziywa kwe-meta, ukubuyekezwa kontanga, kanye nekhredithi yocwaningo. Ungamfinyelela kuye schnarrd@gmail.com
Categories:	UkubambisanaVula UkufinyelelaBhekisiswa ontangaEzokuxhumana KwesayensiUkwethulwa
Tags: CindezelaI-Psychological Science Accelerator